ကျွန်ုပ်စက်ဘီးကိုဘယ်လိုအလှဆင်နိုင်သလဲ - စက်ဘီး
အဓိက > စက်ဘီး > စက်ဘီးအလှဆင် - ရေရှည်ဖြေရှင်းချက်
စက်ဘီးအလှဆင် - ရေရှည်ဖြေရှင်းချက်
သင်အရောင်ကိုမကြိုက်လျှင်မင်းရဲ့ဆိုင်ကယ်, သင် frame ကိုလုံးဝစတစ်ကာများနှင့်အတူဖုံးလွှမ်းနိုင်ပါတယ်။
အကယ်၍ သင်သည်ပုံစံများ၏ပရိတ်သတ်တစ် ဦး ဖြစ်လျှင်စတစ်ကာများကိုဘောင်တစ်လျှောက်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောနေရာများတွင်ထားနိုင်သည်မင်းရဲ့ဆိုင်ကယ်ပုံစံများကိုဖန်တီးရန်။
ငါဟာငါ့စက်ဘီးကိုအမြဲတမ်းဆွဲချင်တယ်၊ အဲဒါဟာအဲဒါကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်နိုင်ဖို့နဲ့ဘဝအသစ်ကိုပေးဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါအမြဲတမ်းကြောက်လန့်တုန်လှုပ်မိတယ်၊ ဆိုင်ကယ်ပန်းချီဆွဲရတာအရမ်းကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲ။ သင်ဖျန်းထားသောစက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်သင်ယောက်ျားများသည်အလွန်စိတ်အားတက်ကြွလာခဲ့သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားကြည့်ပါ၊ ဤအရာကိုကျွန်ုပ်မပြုလုပ်ခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန်မှုလိုအပ်သည်၊ Fatta Creations မှ Ali နှင့် Bex တို့ထက်သာလွန်သောအရာ၊ ယခုသင် Instagram တွင်၎င်းတို့ကိုသင်လိုက်နာခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွနု်ပ်တို့အတွက်အကြိုက်ဆုံး Instagram အကောင့်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သူတို့အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင်သူတို့နှင့်တွေ့ကြပါစို့။ ကျွန်ုပ်သည်မှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိနေသည်ဟုထင်ပါသည်။ ၎င်းတို့မည်မျှလှပသည်ကိုကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ကိုအဆင်ပြေစေသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အလီ၏အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနှင့် Bex ၏အလုပ်ရုံသည် st ကဲ့သို့သောရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောဘောင်များအတွက်ရတနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏စက်ဘီးအဟောင်းတွင် DIY မှုန်ရေမွှားဆေးသုတ်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရမည်။ ကိုယ့်စက်ဘီးဟုတ်တယ်ထက်ဝက်လောက်ကောင်းသောဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုလုပ်ဖို့ကိုငါသိသောသူတို့အားဖန်စီ gadget များမဆိုရှိသည် h Frame ဆိုတာဘာလဲမင်းရဲ့ရလာဒ်ကိုကြည့်ရအောင်။ ဒါကငါပြောင်းချင်တဲ့စက်ဘီးပါ။ ငါဘယ်နေရာကိုစတင်ဆွဲမလဲငါဆွဲယူဖို့လိုပြီလို့ထင်သလဲ။ အရာအားလုံးကိုချန်ထားပါ၊ အကယ်၍ သင့်တွင်သံမဏိသို့မဟုတ်အလူမီနီယံဘောင်များရှိပြီး၎င်းသည်မပုပ်သိုးဘဲနေလျှင်ဒေသခံထုတ်လွှတ်သူကိုရှာပါ၊ သူတို့သည်သဲကောင်းကောင်းအသုံးပြုသည်ကိုသိသဖြင့်သူတို့သည်အလူမီနီယမ်ကိုအလွန်မထိခိုက်ပါ။ ဆေးသုတ်ရန်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးသော့ချက်ကစာသားအတိုင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်တစ်နေ့တာကိုစတိုးဆိုင်စက်ဘီးဖြင့်စက်ဘီးဖြင့်ကုန်ခမ်းရန်ကုန်ကျစရိတ်ပေါင် ၃၀ မှ ၃၅ အထိအကုန်အကျခံပြီးတစ်နေ့ကုန်လွန်ခဲ့လျှင်၊ မင်းတို့အသုံးစရိတ်ကောင်းကောင်းရလိမ့်မယ်၊ အကယ်လို့သင်ကပန်းချီကားကိုအညီအမျှအညီအမျှထုတ်ပစ်လိုက်ရင်၊ အဲဒီစတစ်ကာတွေထဲကတစ်ခု၊ ဒီထူထပ်တဲ့စတစ်ကာတစ်ခုရှိလျှင်၊ ရောင်ခြည်သည်အလွန်ကောင်းစွာမဖြတ်သန်းနိုင်ပါ၊ ၎င်းသည်မှုန်အမှုန်များ၏စွမ်းအင်ကိုစုပ်ယူသဖြင့်သင်ဘာလုပ်သနည်း။ အဆုံးသို့သွားမည်၊ သို့သော်သင်သည်အလူမီနီယမ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုထွက်နေသည့်ခေါင်မိုးတစ်ခုဖြင့်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က Blaster ကိုမရောက်ခင်မှာအဲဒီမျက်နှာပြင်စတစ်ကာတစ်ခုစီကိုဖယ်ပစ်တော့မယ်။ သင်ရတဲ့အခါသင်ကပိုပြီးချောချောမွေ့မွေ့ပြီးချန်ထားလိမ့်မယ်။ သူတို့ကိုငါဒါသူတို့ကိုငါကိုယ့်ကိုကိုယ်ချသဲဖို့ရှိသည်ထွန်းလင်း။ အလီသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ကိုထုတ်ယူသည်၊ သို့သော်ဤစီမံကိန်းအတွက်တောက်ပြောင်ရန်အတွက်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်အမှတ်တံဆိပ်များပယ်ဖျက်ခြင်းသည်အဆင်ပြေသွားမည်။ ထို့နောက်၎င်းကိုပြင်ဆင်ပြီးနောက် A320 ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကျော်ဖြတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ငါပန်းချီဆွဲရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီငါ Penfold သတ္တုကုမ္ပဏီ၌ငါရှိရာငါသည်ငါ့ဘောင်ပန်းချီအဘို့အ sandblasted ရှိသည်လိမ့်မယ်, ဒါကြောင့် Jed ကိုသွားကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သဲသုတ်ခြင်းအကြောင်းသည်အဘယ်သို့ကြည့်ရှုကြကုန်အံ့, ဒီမှာလှပသောဘောင်, ဘောင်လုံးဝဖြစ်ခဲ့သည် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီး ၁၅ မိနစ်လောက်ကြာပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုပ်မိတာထက်အများကြီးပိုကောင်းတယ်။ ဒါကြောင့်ငါလုပ်လိုက်တာတကယ်ဝမ်းသာတယ်။ ပျော်စရာကောင်းတဲ့အချိန်အတွက်ဘောင်ကိုအေးအေးဆေးဆေးအနားယူသွားပြီ။ အရာအားလုံးအခုအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ၊ ငါသိသမျှအားလုံးသည်ငါအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောအနည်းငယ်တောက်ပသောအရာတစ်ခုခုကိုလိုချင်သည် ok ငါအရောင်အနည်းငယ်ထွက်ရှိသည်သင်ထင်သောအရာကိုကြည့်ရှုသူတို့ထဲကeကိုတစ်နည်းနည်းနဲ့ပြောင်းလဲနှင့်တော်တော်လေးရယ်စရာဖြစ်ကြသည်။
ဒီနှစ်ခုလုံးကိုပြosနာမဟုတ်တဲ့ aerosol နဲ့လုပ်နိုင်တယ်၊ နှစ်ခုကိုထုတ်ပစ်မယ်၊ ခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နှစ်ခုအထိဒါနှစ်ခုလုံးကိုလုပ်နိုင်တယ်၊ ဒါကစက်ဘီးအမြောက်အများပါ။ ထုတ်လုပ်သူများယခုအရောင်ကိုအသုံးပြုနေသလား။ အပြာရောင်မှခရမ်းရောင်သို့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အရိပ်ငါးခုဖြစ်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ဤထက်အနည်းငယ် ပိုမို၍ အံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤသို့သွားမည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ပန်းချီဆွဲပါ၊ ဒါပေမယ့်ပေါင် ၁၀၀ လောက်သောအမှတ်အသားအတွက်သင်ဘာလိုအပ်သည်ကိုသင်ရနိုင်သလောက်သင်ရနိုင်ပါတယ်။ သင်ပထမ ဦး ဆုံးလိုအပ်တာကသင်ရရှိနိုင်သည့် primer၊ သင်အားလုံးကို aerosol ပုံစံဖြင့်ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင်ဆိုင်ကယ်အနက်ရောင်ကိုပထမ ဦး ဆုံးပန်းချီဆွဲရမယ်၊ အရောင်ကကောင်းတဲ့အနက်ရောင်အောက်ခံကုတ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်။ ဒါကြောင့်မင်းမှာအနက်ရောင်ဘူးတစ်လုံးရှိတယ်၊ ပြီးတော့အဲဒီအရောင်ဟာ Chromacoat အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပြီး၊ အနက်ရောင်အခြေကုတ်အင်္ကျီကိုဖြတ်ပြီးသင်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေလိမ့်မယ်။ 2k clear coat ကိုအကြံပေးလိမ့်မယ်၊ ဒါကအရောင်တင်ဆီဖြစ်ပေမယ့် 2k ပါ။ ဒါဆိုသင်ကမတူညီတဲ့ဓာတုပစ္စည်းနှစ်ခုကိုအတူတူရောစပ်လိုက်တယ်။ epoxy အရောင်တင်ဆီပါ။ 2k အရောင်တင်ဆီနှင့်တစ်ခုတည်းသောအရာ၌၎င်းတွင်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောအရာများပါဝင်သည်။ မျက်နှာဖုံး ၀ တ်ပါ၊ အနည်းဆုံးကောင်းသောမီးသွေးမျက်နှာဖုံးနှင့် ၀ တ်ပါ။ အငွေ့များကိုစုပ်ယူသည့်အလွန်ကောင်းသောပန်ကာဖြင့်အပြင်တွင်ပြုလုပ်ပါ။ ကောင်းစွာလေဝင်လေထွက်ကောင်းသောinရိယာတွင်အပြင်ဘက်၌ပြုလုပ်ရန်သင့်အတွက်အန္တရာယ်ရှိသည်။ ဆေးခြယ်ရန် ၁ ကီလိုရနိုင်သည်။ အများကြီးလျော့နည်းဒါအမှန်တကယ်စိတ်ပူစရာဘာမျှပေမယ့် longevi များအတွက်ဖြစ်ကြသည် ty, 2k ဆိုတာမင်းဒီမှာရှိနေတုန်းသွားရမယ့်လမ်းပဲ။ ငါတို့ဘယ်လိုပုံဆွဲရမလဲဆိုတာပြမယ်။ အဲလေယာဉ်တွေသုံးတဲ့အခါဘာကိုမျှော်လင့်ရမလဲဆိုတာစိတ်ကူးတစ်ခုပေးမယ်။ ဒါဟာအတိအကျအတူတူဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေမယ့်သင့်ကိုကောင်းတဲ့အကြံဥာဏ်ပေးတယ်။ အရမ်းကောင်းတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးငါဒီမှာဖြန့်ဖြူးတာမျိုးမလုပ်ဖူးသေးဘူး၊ ငါတို့မဖုံးချင်တဲ့inရိယာတွေမှာ primer မရတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့၊ ငါတို့ဖုံးထားချင်တယ်၊ ငါ့မှာဒီနေရာမှာဖုံးအုပ်ထားတဲ့တိပ်တွေရှိနေပြီးထိုင်ခုံပြွန်နဲ့အောက်ခြေ bracket ကိုခေါင်းထဲထည့်ထားလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်အောက်ခြေကွင်းခတ်ထဲမှာ Bung အချို့ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်သင့်မှာ Bung မရှိရင်ဒါကိုဖုံးကွယ်ထားနိုင်ပါတယ်။ သင်၏ frame ကိုပန်းချီဆွဲခြင်းသည်သင်သေနတ်နှင့်ရောမှုန်ရေရောပါလုပ်နိုင်သောအရာဖြစ်သည်။ သင်က၎င်းကိုလှည့်ပတ်သောအခါမည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုသင်ပထမဆုံးပန်းချီဆွဲမည်၊ သင့်တွင်အလွန်ကောင်းသော Trigger ထိန်းချုပ်မှုမရှိပါကအပြီးသတ်ထွက်လာလိမ့်မည် Aerosol ကိုသုံးတာကခက်တယ်ဒါကြောင့်ငါကမင်းကိုဆုံးခန်းတိုင်လာမှာပါလို့အကြံပေးချင်တယ်မဟုတ်လား။ ထို့နောက် Arunas သို့ ဦး တည်သွားစေနိုင်သောဆေးများစုစည်းထားပါ။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ 2k primer နှင့်အလုပ်လုပ်နေပြီးသင်ဤမျက်နှာဖုံးကို ၀ တ်ဆင်ပါ။
၎င်းတွင်လေကြောင်းထောက်ပံ့မှုရှိပြီးသင့်အားအဆုတ်ထဲသို့ရေနွေးငွေ့နှင့်ရှူရှိုက်ခြင်းထက်သင့်အားလေကောင်းလေသန့်ကိုပို့ဆောင်ပေးလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်စာရွက်ပေါ်မှာစပြီးလက်တွေ့ခံစားခဲ့ရတာမဟုတ်တာအမှန်ပဲ။ အခုငါအမှန်တကယ်ကြိုးစားဖို့အချိန်ရောက်ပြီ။ ငါ forks ကိုကြိုးစားပြီးစမ်းကြည့်ရအောင်။ ဒါကငါ့စက်ဘီးပါ။ အားလုံးကနောက်အဆင့်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီးပြီ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စိတ်ရှည်သည်းခံခြင်းသည်ကြီးမားသောအရာဖြစ်သည်။ ကောင်းမွန်စွာပြုသည်။ အလွန်ကောင်းသည်။ အရောင်အတွက်အလွန်ကံကောင်းသည်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစွန့်ခွာပြီးငါစုတ်စိုစွတ်သောသဲကန္တာရတွင် 600 grit စက္ကူဖြင့်နွေးထွေးသောဆပ်ပြာရေဖြင့်စတင်ပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဘောင်တစ်ခုလုံးတွင်အလုပ်လုပ်မည်ဖြစ်ပြီးလမ်းဆုံလမ်းခွတွင်မစုံလင်မှုများအားလုံးကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်သော်လည်း၊ အရူးတစ်စုံတစ်ရာမလုပ်လိုတော့ပဲချောချောမွေ့မွေ့ပြီးနိမ့်မယ်ဆိုရင်ခြောက်သွေ့တဲ့ primer ကနေပြန်တက်လာသည်။ Ju ကိုအာရုံစိုက်ပါ။ ဒါကြောင့်ငါ frame ကိုလုံးဝသဲမွှေလိုက်တယ်။ ဘောင်မှာဒါကိုရှင်းပစ်ဖို့လိုတယ်၊ ဒါဆိုbကိုငါbပဲထားမယ် အချို့ရေများနှင့်အဝတ်အထည်တစ်ခုယူပြီးလျှင်သုတ်ပါ။ အရာအားလုံးကိုသုတ်ပါ။ ထို့နောက်သန့်ရှင်းရေးအတွက်၎င်း primer ဖြင့်သုတ်ပါ။ ထို့နောက် Coatali အခြေစိုက်စခန်းမှကျွန်ုပ်အားဤစတစ်ကာများကိုပေးထားပြီးထိုစတစ်ကာများသည်ခေါင်းပေါ်တွင်ရှိသည် ပြွန်၊ ထိုင်ခုံပေါ်ရှိအောက်ခြေခုံသည်ဘရိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေသည်၊ အချို့သောလမ်းဆုံလမ်းခွများတွင်အချို့သောဆေးသုတ်ဆေးများကိုကျွန်ုပ်မလိုချင်ပါ။ ထို့ကြောင့်စတစ်ကာများအားလုံးတွင်ရှိနေပြီးအနက်ရောင်အောက်ခံကုတ်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီလို aerosols ကိုသုံးတာကမျက်နှာဖုံးဝတ်ဆင်ရတာသိပ်အရေးကြီးတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါဒီမှာခေတ်မှီတဲ့မျက်နှာဖုံးရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့မင်းမျက်နှာဖုံးကိုတင်လိုက်ရင် hearmeum ကိုတကယ်ကြားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ကံကောင်းတာကမျှော်လင့်ချက်မပြည့်စုံဘူး။ ဒါကြောင့် basecoat တွေပြီးပြီ။ ငါကဒီဘောင်တစ်လျှောက်လုံးမှာတော်တော်များများကစုဝေးလိုက်တာလို့ထင်တယ်။ အခုငါတို့ j ဖြစ်တယ်။ အပြင်မှာတော်တော်အေးလွန်းလို့အတွင်းကိုယူမယ်။ နည်းနည်းပူနွေးတဲ့အတွက်ခြောက်သွားလို့မနေ့ကပထမအနက်ရောင်အောက်ခံကုတ်အင်္ကျီအပြီးနောက်ကျွန်တော်ဟာဒုတိယကုတ်အင်္ကျီတစ်ထည်ကိုဝတ်ပြီးအတွင်းထဲကိုသွင်းလိုက်တယ်။ ပူနွေးပြီးအခြောက်ခံပါစေတစ်ညလုံးခြောက်သွေ့နေပါစေ။ ပျော်လွန်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပျော်ရွှင်မိပါသည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်သည် apre-paint ဖြင့်သုတ်။ သုတ်ပါ။ ထို့နောက်ကြင်ကြင်နာနာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသတ္တဝါများဖန်တီးသောဤဖယောင်းစက္ကူကို ကပ်၍ ကျွန်တော်ကပ်ပါလိမ့်မည်။ t ငါ့မှာဝလေနဂါးတွေရှိတယ်၊ ငါ့မှာနဂိုကငါကခက်ရင်းနှစ်ချောင်း၊ ထိုင်ခုံပြွန်မှာ ၂ ခုထားမယ်၊ ပြီးတော့ပြွန်အောက်မှာပြထားတဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိတွေကိုငါမရေးထားတာသေချာတယ်မဟုတ်လား စိတ်မကောင်းပေမယ့်တစ်မိနစ်အတွင်းမျှော်လင့်ကောင်းပါတယ်။ ဒါကိုရအောင်၊ ငါ့စတစ်ကာများကျွန်ုပ်သည် DIY ဆေးသုတ်ခန်းရှေ့မှာဝယ်လိုက်တာပါ၊ ယခုအချိန်ကောင်းအတွက်အဓိကဆွဲဆောင်မှုကတော့အရောင်တွေတော်တော်လေးရှုပ်ထွေးနေပေမယ့်ကျွန်တော်တို့မြင်ရပါလိမ့်မယ် အိုဘုရား၊ လှလှကိုကြည့်ပါဘုရားဘုရားကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်ဒါပေမယ့်ဒါကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အရောင်ပါပဲဒါကြောင့်ငါက by- Channel မှာဆေးသုတ်အင်္ကျီနှစ်ထောင်းကိုခြောက်မိနစ်ခန့်ခြောက်သွေ့စေပြီးအခုတော့အရမ်းလှည့်စားဖို့ကောင်းပါတယ် စတစ်ကာများကို Frame မဖုတ်ဘဲပျက်စီးခြင်းမရှိဘဲဖယ်ရှားပစ်ရန်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ စတစ်ကာများပျောက်ကွယ်သွားသော်လည်းဆေးသုတ်သွေ့ခြောက်ပြီးယခုအချိန်သည်fဒါမှမဟုတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကုတ်အင်္ကျီနဲ့ဒါကတကယ်တော့အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းပဲ။ Umali ကပြောတယ်၊ ဒါကိုငါရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးမဖြစ်ဘူးလို့ငါမျှော်လင့်မိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါအရမ်းပျော်တယ်၊ ကြည့်ရတာအရမ်းလှတယ်၊ အခုတော့ ၂၄ နာရီလောက်မှာအိမ်တွင်းခန်းခြောက်တော့မယ်။ ဒီမှာတော်တော်အထင်ကြီးစရာကောင်းတယ်။ ဒီထုံးစံဆေးသုတ်ခြင်းစီမံကိန်းအစမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောရမယ်။ ငါဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုလုပ်မယ်လို့မထင်ခဲ့မိပေမယ့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါနှင့်အတူကပ်ခြင်းအတွက် Bex နှင့် Ali သို့ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းမှာကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲစဉ်ကကျွန်ုပ်မှန်ကန်ကြောင်းစစ်ဆေးရန်အတွက်ဖြစ်သော်လည်းသုံးရက်ခန့်ကြာမြင့်သော်လည်းအလုပ် ၃ ရက်လုံးလုံးအပြည့်ရှိခဲ့သည်။ ပန်းချီကားဟောင်းခြောက်သွေ့ပြီးအတူတူယူဆောင်လာတဲ့ aerosols အားလုံးကပေါင် ၈၀ လောက်ကုန်ကျတယ်။ ဒါကြောင့်မင်းပတ်ပတ်လည်မှာရှိနေပြီဆိုရင်ငါအဲဒီ့ဆေးသုတ်တဲ့နည်းနည်းလေးလုပ်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤအပျော်တမ်းမှပညာရှင်များထံမှအကြံဥာဏ်အချို့ကိုရယူလိုပါက Bex နှင့် Alis youtubechannel သို့သွားပါ၊ ထို့နောက်ဤဆောင်းပါးကိုလက်မကြီး။ ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်ကိုအောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များအပိုင်း၌ဖော်ပြပါ။ က
၁။ သံခမောက်လုံး -စက်ဘီးဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။ Theဆိုင်ကယ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအောက်ပါအတိုင်းအားလုံးဖြစ်ကြသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
7) Chain Lube ။
ဒီနေ့ဆိုင်ကယ်ပိုင်ရှင်တိုင်းရှိသင့်တယ်လို့ထင်တဲ့အချက်လေးချက်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ပထမ ဦး ဆုံးငါဆိုင်ကယ်ဆိုင်ကိုသွားရတယ် (ဂီတ၏ရွှင်လန်းမှု) စက်ဘီးလမ်းကြောင်းသည်နှင်းဖုံးနေသည်။
အားလုံးဆိုင်ကယ်ဆိုင်မှာကြိုဆိုပါသည်။ မင်းဒီမှာဒီမှာအသစ်ဖြစ်နေရင်ဟယ်လိုငါ Arlee ပေါ့ ကျွန်ုပ်သည်စက်ဘီးဆိုင်ကိုစက်ဘီးစီးရန်မိသားစုများကိုအမှန်တကယ်အာရုံစိုက်သောစက်ဘီးဆိုင်စက်ရုံပိုင်ဆိုင်ကယ်ပိုင်ရှင်မိန်းကလေးဖြစ်သည်။
ဒီချန်နယ်နဲ့ကျွန်တော့်ဆိုင်ကယ်ဆိုင်မှာ၊ ကျွန်မရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ကလူတွေကိုသူတို့ရဲ့ကားတွေကိုအိမ်မှာထားခဲ့ဖို့ပါ။ ပြီးတော့လိုင်းမှာအကြံဥာဏ်တွေ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတွေ၊ အထွေထွေလမ်းညွှန်တွေပဲရှိတယ်။ ကုန်စုံစျေး ၀ ယ်တာကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ၊ ကျောင်းပစ်ကပ်ကနေဘယ်လိုရှင်သန်နိုင်ရမယ်၊ ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကုန်တင်စက်ဘီးများ၊ ကလေးငယ်များစက်ဘီးများနှင့်လျှပ်စစ်စက်ဘီးစီးခြင်းများကိုတကယ်အာရုံစိုက်သည်။
အောက်ပါ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုသေချာကြည့်ရှုရန်ဤအရာများလိုအပ်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်ဆိုင်ကယ်ထဲ ၀ င ်၍ ကျွန်ုပ်မေးခွန်းတစ်ခုမေးသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်ဆိုင်ကယ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောစကားပြောရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ ဒီတော့ဒီနေ့ငါသောကြာနေ့ကဇနီးမောင်နှံတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောနေမှာပေါ့၊ သူတို့ကစက်ဘီးအသစ်တွေနဲ့လာတာဆိုတော့သူတို့ဘာလိုအပ်တယ်ဆိုတာသိချင်လို့လား။ သူတို့ကမြို့တော်ဆိုင်ကယ်အသစ်တွေ၊ အထူးသဖြင့်ဒီသူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပဲရတယ်။ ဒါကြောင့်ငါလူတွေကိုပြောချင်တယ်၊ မင်းသိတဲ့အရာကနေစပါ။ ပထမအဆင့်၊ ဘယ်ပဲပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လူတွေကိုငါစလုပ်တဲ့နေရာပဲ။
ပြီးတော့သင်ပထမခရီးစဉ်ကိုသွားပြီး၊ ကော်ဖီတစ်ခွက်ဝယ်ချင်တယ်၊ ဒါ့ကြောင့်သော့ခတ်ထည့်လိုက်တယ်။ ဒါမှမဟုတ်၊ ဟေးငါစက်ဘီးစီးခရီးရှည်သွားခဲ့တယ်၊ ပြီးတော့လမ်းပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကိုငါတို့ပြောကြမယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ဆိုင်ကယ်ပိုင်ရှင်တိုင်းလိုအပ်တဲ့အခြေခံတွေနဲ့ပဲငါစချင်တယ်။
ဒီတော့မင်းကိုမင်းဆိုင်ဆိုင်မှာလမ်းလျှောက်ထွက်သွားလိမ့်မယ်။ သင်ပထမ ဦး ဆုံးလိုအပ်သည်မှာသံခမောက်ဖြစ်သည်။ သံခမောက်လုံးက ၄၅ ကနေ ၄၅ အထိအထိရှိတယ်၊ တစ်ချိန်ကကျွန်တော်ဒေါ်လာ ၃၅၀,၄၀၀ ဝယ်ခဲ့တယ်။
ဒီမှာငါ့အကြိုက်ဆုံးနေ့စဉ်ဆိုင်ကယ်သံခမောက်လုံး၊ တောင်နှင့်လမ်းသီးခြားခမောက်စုံနှစ်ခုနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုငါပြမယ်။ စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်သင်ဘာလုပ်မည်ကိုမသိသောယေဘုယျသူများအတွက်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးသံခမောက်သည်ဤကဲ့သို့သောအရာဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည် Kali Chakra Solo ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဖြုတ်တပ်နိုင်သော visor တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရရှိနိုင်တဲ့အရွယ်အစားစုံစုံစုံလင်တဲ့စုံလင်တဲ့ဒေါ်လာ ၄၅ တန်ရတယ်။ လေဝင်လေထွက်ကောင်းရန်မလွယ်ကူပါ။ သင်ဤအရာကိုတင်လိုက်သည်နှင့်၎င်းသည်အခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုမှ ၆၀၊ ၇၀ ဒေါ်လာခမောက်နှင့်တူသည်။
သင်ပုံမှန်မြို့ပြဆိုင်ကယ် ဦး ထုပ်ကိုအတူတူပင်စျေးနှုန်းဖြင့်ရနိုင်သည်။ ဤတွင်သင်၏ Lazer သံခမောက်လုံးဖြစ်သည်။ သင်၏ Nutcase သံခမောက်လုံးငါ Lazer Next ကိုတကယ်နှစ်သက်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၅ ဒေါ်လာဖြင့်ရောင်းချခြင်း၊ လေဝင်လေထွက်ကောင်းခြင်းသည်အကောင်းဆုံးလေဝင်လေထွက်မဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့်သင်ကအများကြီးချွေးထွက်ရင်ဒီဟာကငါအကြံပေးတဲ့သံခမောက်မဟုတ်ဘူး။ နောက်ကျော၌ကောင်းသောသဘောထား။
၎င်းတို့ထဲမှအချို့ကို Velcro သို့မဟုတ် pads များဖြင့်အလွယ်တကူညှိနိုင်သည်။ သို့မှသာကောင်းမွန်သောချိန်ညှိနိုင်သည်။ ဒါကအလင်းပေါ့၊ ခလုတ်တစ်ခုပါ။ ဒီတော့သင့်မှာကလေးငယ်တွေရှိရင်အဲဒါကိုလွှင့်ပစ်လိုက်ပါ၊ ဒါပေမယ့်အလင်းရောင်ကအရမ်းလှတယ်။
ဒါက Kali ဆီကသံခမောက်အသစ်ပါ၊ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က Danu ထွက်လာပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ Kinda သည်လေဝင်လေထွက်ကောင်းသော်လည်းတူညီသည်။ မှန်ပါသည်။ ဒီ visor ကိုဖြုတ်တပ်လို့ရတယ်၊ နောက်ကျောမှာညှိရတာလွယ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့မင်းဒီသံခမောက်လုံးကိုကောက်ရတယ်။ အရမ်းမိုက်တာပေါ့။ ဒါ့ကြောင့်သူ၌ဤမျှအေးမြသောသံလိုက်လည်ပတ်မှုပုံစံပုံစံရှိသည်။ ကျွန်ုပ် Kali Danu ကဲ့သို့၎င်းကိုလက်ဖြင့်ဖွင့ ်၍ ပိတ်နိုင်သည် အဲဒီမြို့ရဲ့အသွင်အပြင်အတွက်လေဝင်လေထွက်ဒေါ်လာ ၆၀ နဲ့ဒီသံခမောက်ကိုငါတကယ်ကြိုက်တယ်။
ဒါကြောင့်ငါစျေးနှုန်းလှေကားကိုတက်လိုက်တယ်၊ ငါမဝတ်ဆင်တဲ့တခြားသံခမောက်တွေအများကြီးရှိတယ်၊ ငါစီးတီးစက်ဘီးစီးတာကိုတကယ်ပဲအာရုံစိုက်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါဘာလုပ်သလဲဆိုတာကိုဝတ်ဆင်တာပေါ့။ ဒါဆို Kali Central ဆိုတာနောက်တစ်ခုပါ။ မီတာကီလီသည်လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်သည်။ ၎င်းသည်လမ်းခလုတ်တစ်ခုကဲ့သို့ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးအနောက်ဘက်တွင်အလင်းရောင်ရှိသည်။ ၂၀၂၀ မီးသည်အားပြန်သွင်းနိုင်သည်။ $ 80 ပြီးတော့အဲဒါကိုယုံဖို့အတွက်အဲဒါကိုကောက်ရမယ်ပေါ့။ ဤကဲ့သို့သောမြို့မျိုးတွင်ကျွန်ုပ် ၀ တ်ဆင်သည့်နောက်ဆုံးခမောက်မှာ Kali City ဖြစ်သည်။
သင်သည်ငါဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်ငါ့ကိုလိုက်နာလျှင်, သင်ဤသံခမောက်လုံးကိုမြင်ကြပြီ။ သူ့မှာတကယ့်ကိုအေးအေးဆေးဆေးသော visor ရှိတယ်၊ ဒါကြောင့် visor သံခမောက်ကပေါ်လာတယ်၊ အဲဒီအရောင်အပြည့်ဒါမှမဟုတ်မီးခိုးတွေထွက်လာတယ်။ ပြီးတော့သူဟာကယ်တင်ခြင်းရတယ်။ ဒီနေရာမှာ eBike စီးနင်းနည်းနည်းအေးအေးဆေးဆေးနေရင်ဒီမှာအပေါက်တွေမရှိဘူး၊ ဘာလဲ တကယ်ကောင်းတယ်
ပုံမှန်ထိတွေ့နားဆင်နိုင်ပါ၊ ၎င်းသည်ဆောင်းရာသီကားမောင်းသောအခါသင်နားပိတ်ခတ်များရှိသည်။ ကြည့်ကြရအောင်။ ပြီးတော့ငါတို့မှာဒေါ်လာ ၁၀၀ မှ ၂၀၀ ကနေစပြီးတောင်ကြီးစက်ဘီးအတွက်သီးသန့်ခမောက်တွေတပ်ဆင်ထားတယ်၊ လွှမ်းခြုံမှုပိုရမယ်၊ ကြာရှည်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်။ တချို့မှာ GoPro တောင်ရှိတယ်။ လမ်းသံခမောက်များသည်ဒေါ်လာ ၉၀ မှစတင်သည်၊ ဒေါ်လာ ၂၅၀ အထိတက်နိုင်သည်၊ မိုက်မဲသောပေါ့ပါးခြင်း၊ လေစီးကြောင်း spandex အမြောက်အများရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နံပါတ်တစ်သံခမောက်ဖြစ်သည်။ သင်မြင်နိုင်သည့်အတိုင်းအကွာအဝေးတစ်ခုအပြည့် ရှိ၍ ကျွန်ုပ်သည် ၄၅ မှ ၁၀၀ အထိပေးမည်။ တကယ့်ကောင်းတဲ့အရာအချို့နှင့်ပါ ၀ င်ပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိသည့် ဦး ထုပ်တစ်ခုအတွက်အစီအစဉ်တစ်ခု။
နံပါတ်နှစ်တစ်ကြမ်းပြင်စုပ်စက်။ သူတို့က ၂၀ ကနေငါဆိုင်မှာသုံးတဲ့ဒေါ်လာ ၂၀၀ အထိရှိတယ်။ ကျွန်တော်သွားချင်တဲ့နေရာကတော့ JoeBlow Sport2။
ကျွန်တော်ဟာအဲဒါကိုနယ်လှည့်စက်ပြင်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ဖူးပြီး၊ ရှစ်နှစ်ကြာအသုံးများတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာခေါင်းကိုကျွန်တော်အစားထိုးလိုက်တယ်။ ပထမ ဦး စွာကြမ်းပြင်စုပ်ယူပါ။ အကယ်၍ သင်သည်တစ်ပတ်လျှင်သုံးကြိမ်၊ လေးကြိမ်မောင်းလျှင်၊ သင်၏တာယာများကိုတစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်တင်ရမည်။ သင်အလုပ်လုပ်သောပန့်ကိုလိုချင်သည်။
သင်ထွက်တော့မည်၊ ထပ်မံစီးနင်းပါ၊ စွန့်စားခန်းလုပ်ကာသင်၏ကိုယ်ပိုင်တာယာများကိုစတင်ပြောင်းလဲတော့မည်ဟုဆုံးဖြတ်ပါကသင်ဝယ်ယူမည့်သူအတွက်သင်၏ပထမဆုံးပစ္စည်းလေးအတွက်ကျွန်ုပ်လုံးဝမထောက်ခံပါ။ မင်းရဲ့အဝတ်အစားတွေအကြောင်းမင်းအခုပြောတော့မယ်။ ဦး ခေါင်းအကြောင်းပြောကြစို့၊ သွားကြကုန်အံ့ကုန်းနှီးအိတ်များကဲ့သို့သောအရာများသည်ကုန်းနှီးအောက်တွင်သွားကြသည်။
ပင်စည်နှင့်ထိပ်ပြွန်အကြားကိုက်ညီသော bento သေတ္တာတစ်ခုရှိသည်။ အကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သောအပေါက်အပေါက်များပါ။ သူတို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုပြပေးပါရစေ။
ဒီဟာငါ့နေ့စဉ်ဆိုင်ကယ်အများစုမှာပါ ပြီးတော့ငါတကယ်တော့အဲဒါကိုငါတို့ပြိုင်ကားစက်ဘီးများမှာသုံးဖို့ငါတို့မှာရေစာမလောက်လို့ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ပစ္စည်းများကိုကျွန်ုပ်၏အိတ်များထဲမှထုတ်ပြီးစက်ဘီးပေါ်တွင်တင်ခြင်း၏အဓိကပရိသတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်သင်ပစ္စည်းများကိုသယ်ဆောင်ချင်ပါသလဲ။ ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသလော ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသံခမောက်တွေလုပ်တယ်၊ စုပ်စက်တစ်ခုလုပ်တယ်၊ မင်းတို့ပစ္စည်းတွေကိုသယ်ပြီးငါတို့နောက်ဆုံးမီးမဟုတ်သေးဘူး။
ဒါကြောင့်စက်ဘီးလုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရဖို့ဒါမှမဟုတ်မြင်ဖို့အတွက်မီးတွေကိုအတူတကွဖြိုဖျက်ခဲ့တယ်။ မြင်ရဖို့, ရိုးရှင်းတဲ့မျက်တောင်ခတ်သည် $ 20 ရှေ့နှင့်နောက်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ကြည့်ရတာဒေါ်လာ ၄၀ ကနေ ၇၀ အထိပိုများမှာဖြစ်ပြီးအဲဒါအများစုကို USB မှတစ်ဆင့်အားသွင်းလိမ့်မည်။ ကောင်းပါတယ်၏မျိုး။
ဒါကြောင့်ငါသုံးတဲ့နဲ့ရောင်းတဲ့မီးကိုမင်းပြပေးပါရစေ။ ဒီတော့ Planet Bike Lights ကလူအများစုကို 'beမြင်' မြင်ကွင်းအတွက်ငါရောင်းလိုက်တာပဲ။ အနက်ရောင်အစေး၊ မင်းကိုကျော်မသွားချင်ဘူး ထိုအခါငါသူတို့ကိုလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်မောင်း။
ငါကားမောင်းနေတဲ့အာရုံကိုမကြည့်ခင်မြင်ချင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်အလင်းကိုတောက်ပတဲ့အလင်းရောင်နဲ့အာရုံစူးစိုက်ချင်တယ်၊ ငါ့ရဲ့အလင်းရောင်ဟာနေ့ရောညပါအလင်းရောင်ဖြစ်တယ်။ ဒီနေ့နေ့လည်နေသူတွေနဲ့ဒီအရာအားလုံးတွေရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ငါထင်မြင်ချက်ကတော့ ရိုးရှင်းစွာဖြင့်သင်၏မီးလုံးကိုအမြဲတမ်းထားပါ။ ထိုအခါကျွန်ုပ်တို့သည်အပေါ်ထပ်သို့တက်။ ကြည့်ရှုနိုင်ပြီးလျောက်ပတ်သောကလစ်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်သင်မှောင်မိုက်၌မြင်နိုင်သောကောင်းမွန်သောအရာတစ်ခုအတွက် USB အားသွင်းမှုများနှင့် lithium ဘက်ထရီများသည် ၃၅-၆၅ ကိုရှာဖွေနေသည်။ အလင်းပိုမြန်လေလေ၊ သင်၏အလင်းကိုမီသွားလိမ့်မည်၊ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အလုံအလောက်မမြင်နိုင်သောကြောင့်သင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်မောင်းနှင်နေသောကြောင့်သင်တုန့်ပြန်ရန်အချိန်မရှိပါ။ ဒါကြောင့်မင်းတို့ဘယ်လောက်မြန်မြန်သွားမယ်ဆိုတာပေါ်မူတည်ပြီးပိုတောက်ပတဲ့အလင်းကိုလိုချင်တယ်။
ပြီးတော့ငါဒီမှာရှိနေလို့ဒီဂတ်စ်ကိုအရမ်းချစ်လို့ပေါ့။ ဘီးမီးလုံးအခုအချိန်မှာငါ့အရာဖြစ်ကြ၏။ သူတို့ကဘေးထွက်မြင်နိုင်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်၊ တောက်ပတယ်၊ လူတွေရဲ့အာရုံကိုဆွဲဆောင်တယ်။ ငါသူတို့ကို N204 မျောက်အလင်းကိုချစ်တယ်။ ညဘက်မှာစီးမယ်ဆိုရင်သူတို့ဆိုင်ကယ်ဆီကိုမျောက်မီးတွေထည့်မယ်၊ သူတို့ကငွေမပေးရဘူး။ Talking Head ဆောင်းပါး? ငါတို့စက်ဘီးကိုမကြာခဏစီးနင်းခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ အလုပ်ရခြင်း၊ ကော်ဖီသောက်ခြင်းနှင့်တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးခြင်းတို့ကိုတားဆီးပေးသောအတားအဆီးများသည်သင်သိသည့်အတိုင်းသင့်ရည်မှန်းချက်သည်သင်၏စက်ဘီးပေါ်သို့တက်။ ထွက်ခွာရန်ဖြစ်သည်။ အိမ်မှာကား။
လာမယ့်အချိန်အထိ, ဒီစက်ဘီးဆိုင်မိန်းကလေးနှင့်အတူ Arlee ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆိုင်ကိုလာလည်ပတ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် (တေးဂီတ)
၁အရောင်မင်းရဲ့စက်ဘီးလုပ်နိုင်တဲ့တရားရုံးချုပ်အထူးကဆိုပါတယ်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားစေပြောင်းလဲနေတဲ့ကအရောင်မည်သည့် RTO မှယာဉ်၏အတည်ပြုခဲ့သည်အရောင်များခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်လုပ်နိုင်ဖြစ်စေ၊ဆိုင်ကယ်ဒါမှမဟုတ်လုပ်တယ်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ဒေသခံ RTO ထံမှကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ယူနေသမျှကာလပတ်လုံးထုံးစံဆေးသုတ်အလုပ်လုပ်တယ်ဒီတော့04/16/2021
စက်ဘီးအထိန်းကသင်၏သန့်ရှင်းရေးနှင့်ချောဆီကိုအကြံပြုသည်ဆိုင်ကယ်မောင်းကွင်းဆက်အနည်းဆုံးတစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အကာအကွယ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်။ Theကွင်းဆက်နှင့် drivetrain ပုံမှန်အားဖြင့်သင့်ရဲ့ညစ်ညမ်းသောအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြသည်ဆိုင်ကယ်နှင့်ဤဖုန်များအတွက်မကောင်းတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ကယ်အသက်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်။မတ် ၂၁ 2019
ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီ၊ ဆိုလိုတာကဒါကစီးပွားရေးအချိန်ပါပဲ၊ ကောင်းပြီ၊ ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးရခဲ့တာက Andrew Reitsma မှချောဆီနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့်သူက 'hello from under under' လို့ပြောတယ်။ 'ဟယ်လို။' ဘယ်လောက်ကီလိုမီတာမှာကွင်းဆက်ကိုပြန်လည်သန့်စင်ဖို့လိုသလဲ။ ခြောက်သွေ့တဲ့ရာသီဥတုမှာ ' လျှောမကျမီ၎င်းကိုအချိန်တိုတိုင်းဖယ်ပေးသင့်ပါသလား။ wow၊ ဒါက worms တွေရဲ့အပြည့်အဝလုပ်ရပ်ဖြစ်ပြီးအရာဝတ္ထုတွေကိုစတင်ဖို့။
လူများစွာသည်သူတို့၏ချည်နှောင်ခြင်းကိုဂရုပြုသင့်သည်ဟူသောခိုင်မာသည့်ယုံကြည်ချက်ရှိပြီး၎င်းသည်စက်ဘီး၏အရေးကြီးသောအရာဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါထင်တာကအရာဝတ္ထုတွေကိုပြန်စဉ်းစားလို့ရတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ကီလိုမီတာရာနှင့်ချီသောဘဝကိုသင်၏ကွင်းဆက်ထဲမှထုတ်ပစ်ရန်ကြိုးစားနေပါက၎င်းကိုကျော်ဖြတ်ရန်မထိုက်တန်ပါ။
ဒါပေမယ့်တိကျတဲ့လုပ်မယ့်နှင့် don'ts ရှိပါတယ်။ အများအားဖြင့်ငါကခြောက်သွေ့ပြီးဆူညံလာတဲ့အခါသင့်ရဲ့ကွင်းဆက်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပါလို့ပြောလိမ့်မယ်၊ ပြီးတော့, degreasing ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ငါဆက်သွယ်မှုအတွက်ကွင်းဆက်ထို့ကြောင့်ကြိတ်စက်များအကြားဖြစ်သကဲ့သို့ငါကြည့်လိမ့်မယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီမှာကွင်းဆက်ဟာဟောင်းနွမ်းသွားတယ်၊ ပြီးတော့ဖုန်တွေ၊ သဲတွေအပြည့်နဲ့ပြည့်နေတဲ့အခါမှာအသစ်တစ်ခုလိုထွန်းလင်းတဲ့အထိသန့်ရှင်းရေးလုပ်ချင်တယ်။ သင်အသုံးပြုသော degreaser အမျိုးအစားကိုအမှန်တကယ်ပွန်းပဲ့စေသော၊ အက်ဆစ်သို့မဟုတ်အယ်ကာလိုင်းပျော်ရည်များကိုမသုံးပါနှင့်။ (က) ၎င်းသည်သင်၏ကွင်းဆက်၏သက်တမ်းအတွက်အလွန်မကောင်းပါ။ ထုတ်လုပ်သူအများစုကသင်ကျောခိုင်းသွားလိမ့်မယ်ဟုပြောလိမ့်မည်
သို့သော်ပုံမှန်စက်ဘီးနှင့်ဆိုင်သောဓာတ်ခွဲခန်းသည်၎င်း၏အလုပ်ကိုမကြာခဏကောင်းကောင်းလုပ်လိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေမရှိဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ကားမောင်းတဲ့နေ့ရဲ့အဆုံးမှာငါခြောက်သွေ့တဲ့အခြေအနေမှာငါမောင်းတဲ့နေရာနဲ့မတူနိုင်လို့ပါ။ ငါပြောခဲ့သလိုပဲတိကျတဲ့နံပါတ်တစ်ခုကိုပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ သင်သိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့မှတ်ချက်များအပိုင်းမှာအထောက်အကူပြုမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒီတော့နောက် TomKrouze ဆီကရတယ်။ Cool အမည်, တွမ်။ စက်ဘီးပေါ်တွင် 'ခိုင်မာသောခိုင်မာသောအကျိုးကျေးဇူးသို့မဟုတ်အရေးပါပုံ' ကားအဘယ်နည်း။ ဘယ်အချိန်မှာငါတောင့်တင်းတဲ့စက်ဘီးလိုသလဲ? တကယ်ကောင်းတဲ့မေးခွန်းပဲ။
ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ငါခိုင်မာသောစက်ဘီးကိုကိုင်တွယ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပေး၏ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ခင်ဗျားရဲ့စက်ဘီးကိုရှေ့ကနေကြည့်လိုက်ရင်စက်ဘီးကမင်းကိုလှည့်ပတ်နေတုန်းအရမ်းပျော်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ သို့သော်၎င်းသည်အရေးကြီးသည်မှာသေချာသည်။
သင်အလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဆိုင်ကယ်ပေါ်တွင်အလွန်မြန်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကောင်းပြီ၊ နောက်တွင် Haziq Annie ၏ 'အောက်ခြေ bracket ကအပြန်အလှန်ဖလှယ်နိုင်သလား' ရှိသည်။ ၂၄ မီလီကန်တာတန်သည် 'adapters စုံတွဲတစ်တွဲနှင့်အတူ BB30 သို့အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်ပါသလား။ ' ဟုတ်တယ်။ ငါတကယ်ထင်ထားတာဒီမှာမင်းရှိတယ်။
လာစမ်းပါ။ ဒီတော့ FSA သေးငယ်တဲ့ adapters ကိုမှန်ကန်စေသည်။ ဒီတော့ဒီတစ်ခုသည် BB386EVO အောက်ခြေကွင်းပြင်မှထွက်သွားပြီး၎င်းသည်ကျသွားမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အထူးသဖြင့် Srams GXP အတွက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ထင်သည် ၂၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံဖြစ်သည်။ (၂၂ မီလီမီတာနှင့် ၂၄ မီလီမီတာနှင့် ၂၄ မီလီမီတာ) အွန်လိုင်းကိုကြည့်ပါ။ adapters များကျိန်းသေရရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော်အောက်ခြေကွင်းခတ်အားလုံးသည် crank type အားလုံးနှင့်မကိုက်ညီပါ။
ဒါကြောင့်ဂရုတစိုက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်။ ဒါပေမယ့်ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်ကျိန်းသေတစ်ခုခုလုပ်နိုင်ပါတယ် အိုကေ, နောက်, ဒီပက်ထရစ်ဂျိုးဇက်ကနေဖြစ်ပါတယ်။ “ စက်ဘီးဆိုင်တိုင်းနီးပါးကသင့်စက်ဘီးအသစ်ကိုရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ပြန်ယူရန်သင့်အားပြောလိမ့်မည်” ဟုသင့်ကိုပစ္စည်းထပ်မံရောင်းရန်ဆင်ခြေတစ်ခုလော။ “ ဟင့်အင်း၊
ကေဘယ်ကြိုးတွေသူတို့ကဆန့်တယ်ဆိုပါစို့၊ ကေဘယ်ကြိုးတွေကမဆန့်တော့ဘူး။ ဒါပေမယ့်ဒီအရာတွေနဲ့ပစ္စည်းပစ္စယအားလုံးညှစ်လို့ရတယ်။ ဒါကမင်းရဲ့ဂီယာတွေကိုနည်းနည်းနည်းသွားစေတယ်။ ကျနော်တို့အကြောင်းအရာအပေါ်ကြီးစွာသောဆောင်းပါးရှိသည်။ တကယ်တော့ဒါကငါတို့အနည်းငယ်ကစားတယ်။
အကယ်၍ သင်၏နောက်ကျော derailleur ကအတိအကျမရောက်လျှင်၊ သင်ဂီယာပြောင်းသည့်အခါ Cogin ကိုလှည့်ပါ။ ဘယ်နေရာမှာလဲ၊ ပြီးတော့ဘယ်မှာသူတို့မကောင်းဘူးလဲ။ ဒါက indexing လုပ်တာပါ၊ အဲဒါကိုပြင်ဖို့နဲ့ derailleur ကိုနေရာတကျရွှေ့ပေးဖို့ပါ။
၎င်းကိုအလွယ်တကူညှိနိုင်သည်။ အိုကေ, ငါတို့ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က youtube ဆောင်းပါး, leecbracing မှ, ဒါမှမဟုတ် lee cb ပြိုင်ကားအောက်မှာနောက်ထပ်တကယ့်ကိုကောင်းတဲ့မေးခွန်းရှိတယ်၊ ဘယ်လဲဆိုတာသေချာမသိဘူး မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုသူတို့က 'ပညာရှင်များသည်အဘယ်ကြောင့်ရှေ့တန်းတွင်ထိုင်နေကြသနည်း' ဟုမေးခဲ့သည်။ အဓိကအားဖြင့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဟာရန်လိုမုန်းတီးတဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာလမ်းတွေပေါ်မှာသွားလျှင်အရမ်းနက်ရှိုင်းချင်တယ်။
ပြီးတော့သင်အမှန်တကယ်နက်ရှိုင်းလာတဲ့အခါသင့်ရဲ့တင်ပါးကရှေ့ကိုလှည့်ပတ်နေတယ်ဆိုတာကိုဆိုလိုတာပါ။ ဒါ့အပြင်သက်တောင့်သက်သာရှိဖို့နဲ့စွမ်းအားကိုထပ်မံထုတ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်သင်ဟာရှေ့ကိုနောက်ကိုလှည့်ချင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ဒါဟာအသစ်အဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်းသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာလှည့်ပတ်နေသောကြောင့်အမှန်တကယ်ပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မကောင်းမှုအပေါ်ဝါကျရှိခြင်း၏အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။
သင်တို့အတွက်စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်သာဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ကုန်းနှီးများကိုဆွဲတင်ပြီးထိုင်ခုံပေါ်ရှိလူများရှေ့သို့ရွေ့လျားကာရှေ့တွင် rivet ၌ထိုင်နေသောအချိန်ကာလမှလာသည် ကုန်းနှီးများရှေ့သို့ဆက်လက်သွားရန်နှင့်အောက်သို့ကျရောက်စေရန်အတွက်ရှေ့တွင်ပိုမိုရှည်လျားသည်။ Matt ၌မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သော Dubai Tour ခရီးစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်တကယ့်ကိုကောင်းသည့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံလေ့လာသင့်သည်။ အနည်းငယ်လေ့လာရန်လိုသည်။ ကောင်းကျိုးများသည်သူတို့၏ရန်လိုသောစီးနင်းမောင်းနှင်ရာနေရာများကြောင့်လူသိများသော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်အစွန်းရောက်မှုများတိုးပွားလာသည်။ (soft music) ကောင်းပြီ၊ အကယ်၍ မင်းဒါကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်၊ ငါ့စက်ဘီးကတော်တော်လေးကိုခက်ခဲပါတယ်။ ဆိုလိုတာကငါဟာငါ့ပြိုင်ပွဲမှာလိုပါပဲ handlebar နဲ့ကုန်းနှီးအကြားကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ကိုငါပြိုင်ပွဲက Johann van Zyl ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ရန်လိုမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ် ငါဆိုသည်ကား၊
ယခုငါတို့ကားမောင်းသူအနည်းငယ်နှင့်စကားပြောပြီးပြီ၊ ဘာကြောင့်သူတို့ကအစွန်းရောက်အရာများကိုယူဆောင်နေပုံရသည်။ - ကောင်းပြီ, ထို့နောက်အမြန်မေးခွန်းနှင့်အဖြေ session ကိုယခု။ ဆောင်းပါးတစ်ခုလုံး၏အနှေးဆုံးအပိုင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သော်လည်းပြီးခဲ့သည့်အပတ်က ThatsSoNathan ၏မှတ်ချက်အရ '' မြန်နှုန်းသတ်မှတ်မှု '' သည် Rapid Fire Q&A တွင်အရေးမကြီးပါ။ 'ဒါဆိုနေသန်၊
မေးခွန်းနံပါတ် ၁၊ ဟုတ်တယ်၊ သူ့နောက်ဘီးမှာပြaနာရှိတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာသူကသူ့ကိုနင်းဖို့ကောင်းတယ်။ '' သူကရှေ့ကိုရွေ့လျားနေပါတယ်
တစ်ခါတစ်ရံမှာနင်းလက်နက်ကလည်နေပြီးဘာမှဖြစ်မလာဘူး၊ ဘာမှားလဲ ကောင်းပြီ၊ ဒါကမင်းရဲ့နောက်ဘီးကတကယ်အိုမင်းလာပြီ၊ ဒါက freewheel ဖြစ်တာနဲ့သင့်ကို pedal and roll မလုပ်နိူင်ဘူး၊ ပြီးတော့ pedal ကိုလည်းခွင့်ပြုတယ်။ အခြေခံအားဖြင့်၎င်းတို့သည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ gunkand နှင့်အထွေထွေ crap နှင့်အနည်းငယ်ပိတ်ဆို့ထားခြင်းခံရနိုင်သည်။ သင်အမှန်တကယ်အားဖြင့်သင်ကပြင်ဆင်နိုင်သောခုန်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်အမှန်တကယ်ခွင့်ပြုပေးသော springy အပိုင်းအစများဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင် website တွင် ၀ င်ရောက်ရန်လိုအပ်သည်။ ညွှန်ကြားချက်များ။ သို့သော်၊ သင်၏ freewheel သည်ပြုပြင်ရန်မတတ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
ဒါကြောင့်အွန်လိုင်းကိုအရင်စစ်ဆေးပါ။ GCN-Bikes မှာဒီနေရာမှာရှိတဲ့ freewheels အများစုဟာငါသူတို့ပြင်ဆင်လို့ရနိုင်မယ်ထင်တယ်။ ဒါကြောင့်မင်းမျှော်လင့်ပါတယ်။
မင်းဒါဖြစ်မယ်သေချာတယ် အိုကေတော့အခုထူးဆန်းတဲ့နာမည်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ oreosaysb00 တစ်ခုရှိတယ်။ '' 28c တာယာနဲ့ဘီးတစ်လုံးကို ၂ ခုမှ ၃ ၀ save လောက်ထိသိမ်းဆည်းထားရင်ဘာလို့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များဟာ 25c တာယာတွေနဲ့စီးကြတာလဲ '' ကောင်းပြီ, တစ်စုံတစ် ဦး ကကောင်းစွာဖြေဆိုနိုင် - Lennart Meinke, သူက 'ဒါဟာ aero နည်းနည်းနှင့်အစဉ်အလာတွေအများကြီး။ အမှန်တရားနှင့်သိပ်မဝေးလှပါ။
Pro Peloton ကိုအမှန်တကယ်ထိုးဖောက်ရန်သိပ္ပံနည်းကျအတွေးအခေါ်သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကြာသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်နေ့တာရဲ့အဆုံးမှာတစ်ခုခုဘယ်လိုခံစားရလဲ၊ လူတွေထင်တာကအရမ်းအရေးကြီးတယ်။ ထို့အပြင်အချက်အလက်ပေါင်းများစွာကပြောလျှင်ပင် ၂၈ နှစ်သည် ၂၅ နှစ်ထက် ပို၍ နှေးသည်ဟုယုံကြည်သူအများစုကယုံကြည်ကြသည်။
သို့သော် 28s သည် 25s ထက်အနည်းငယ်ပိုလေးပြီး aerodynamic နည်းသည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့လေကိုကျော်ဖြတ်ဖို့areaရိယာပိုရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကတော့အကောင်းအဆိုး ၂၈ ခုထက်ပိုတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့်ဘီးတွေပိုပြီးကျယ်လာတာနဲ့အမျှပေါ့။
သိသာထင်ရှားတဲ့ဒီလေခွင်းအားနည်းချက်များအချို့ကိုထေမိ။ ကောင်းပြီ၊ ဒီမှာ Amaury မှသူအမြန်စီးရန် Canyon Aeroad အသစ်ကိုရပြီဟုပြောပြီးလျှင်မြန်သည်။ အမြန်ဖြစ်ပါက၊ တာယာအရွယ်အစား၊ ၂၅၊ ၂၈ မီလီ၊ Continental GP 4000sII အတွက်သင်အဘယ်အကြံပြုသနည်း။ ကောင်းပြီ၊ ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာကိုကြည့်ရရင် ၂၈ နှစ်ဟာအရမ်းကိုအဆင်ပြေမှာပါ။ အထူးသဖြင့်မကောင်းတဲ့၊ ပွန်းပဲ့ပဲ့ပဲ့စင်စက် ၅၀ psi မှာစီးမယ်ဆိုရင်သင့်စက်ဘီးကမှော်ပုံးလိုလှိမ့်မယ်၊ သင်အရမ်းမြန်မယ်။ အကယ်၍ သင်သည်အလွန်ချောမွေ့သောကတ္တရာပေါ်၌မောင်းနှင်နေပြီးလေယာဉ်အင်ဂျင်များသည်အရာအားလုံးဖြစ်ပြီးသင်၏ပျမ်းမျှအမြန်နှုန်းသည်မြင့်မားပါကသင် 25c သို့သွားလိုသော်လည်း၊ 28con နှင့်ကျိန်းသေသွားမည်မှာသေချာသည်။
အိုကေဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်မေးခွန်းများစွာရှိနေပြီး ၄ င်းတို့အားလုံးသည်အပြန်အလှန်ဆက်စပ်နေသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ Dan Fish သည်သူ၏ကော်လာရိုးကိုချိုးလိုက်ပြီးသက်သာရာရစေရန်အချိန်ရှိနေစဉ်သူ၌ရှိသည့်ကျန်းမာမှုကိုထိန်းသိမ်းရန် Turbo Trainer ကိုသူမည်သို့သုံးနိုင်သည်ကိုသိလိုသည်။ ဒီတော့တာဘိုလေ့ကျင့်ရေးသမားတစ်ယောက်နဲ့ဆိုရင်သေချာတာပေါ့၊ သင်အဲဒီမှာအချိန်အများကြီးမသုံးဖို့လိုတယ်။
GCN မော်ကွန်းတိုက်, လေ့ကျင့်ရေးအစည်းအဝေးများစစ်ဆေးပါ။ အကယ်၍ သင်သည်တစ်နေ့လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏မိနစ် ၂၀ သို့မဟုတ် ၃၀ မိနစ်တစ်ခုမှတစ်ခုလုပ်ပြီးပြီဆိုလျှင်သင်အမှန်တကယ်လိုအပ်နေသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ အားလုံးလိုက်ဖက်ရန်အနည်းငယ်ခက်ခဲသော်လည်းသင့်တော်သောနေရန်သင်အနည်းငယ်သာလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်မှာအံ့သြစရာဖြစ်သည်။
စတီဖင်ကင်မင့်သည် Basque National of Tour တွင်ကျရောက်ပြီးနောက်ပြင်းထန်သောဒဏ်ရာများရရှိခဲ့သဖြင့်အသက်အရွယ်မရွေးမောင်းနှင်ပြီးနောက်ဗြိတိန်အမျိုးသားအမျိုးသားလမ်းပေါ်ပြိုင်ပွဲ Champs နှင့်ဗြိတိန်အမျိုးသား National Trial Champs တို့ကိုတနင်္ဂနွေတွင်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ပြီးတော့သူဟာ Zwift ကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့တာအားလုံးနီးပါးဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့နိုင်ငံသားတွေအထိပါပဲ။ လေးနာရီပေါင်းမှာတော်တော်လေး punchy စီးအပါအဝင်။
ဒါကြောင့်သင်သို့မဟုတ်သင့်တွင် smart trainer ဖြင့်ထိုရွေးချယ်စရာမရှိပါကသင်လိုအပ်သမျှသည်အာရုံခံကိရိယာနှစ်မျိုးဖြစ်သည်။ Zwift သည်ယခုအချိန်တွင်ကျွမ်းကျင်သူများစွာလုပ်သကဲ့သို့ကျိုးပဲ့သောကျောရိုးရှိသတ္တဝါနှင့်သင်၏အဖြေဖြစ်နိုင်သည်။ Sanresh Shedekar မှပေးပို့သောနောက်မေးခွန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းစွာချိတ်ဆက်ပါ။ သူကလမ်းပေါ်ရှိသူ၏ FTP သည် ၂၄၅ ဝပ်ရှိပြီး Zwift တွင်သူ၏ FTP သည် ၂၀၅ ဝပ်သို့ကျသွားသည်။ သူသည်အလွန်ဆင်းရဲဒုက္ခခံစားနေရသည်။ သူဘာလုပ်သင့်သလဲ ကောင်းပြီ၊ သင်၏ FTP သည်ယေဘုယျအားဖြင့်အနည်းငယ်နိမ့်ရသည့်အကြောင်းအရင်းများစွာရှိသည်။ သို့သော်ကြီးမားသောတစ်ခုမှာအမှန်တကယ်အပူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်သင်ပူလွန်းသည့်အခါနှင့်လေ၏အေးခဲသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများမရှိဘဲတကယ့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပင်လျှင်ပင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်မပြုလုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည် သင်၏ရှေ့မှောက်ကောင်းသောပန်ကာတွင်သင်၏ ftp သည်အနည်းငယ်အားလျော့သွားနိုင်သည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ပဲ
လေအေးပေးစက်တပ်ဆင်ထားပြီးလေအေးပေးစက်တပ်ဆင်ထားသည့်နေရာတွင်လေ့ကျင့်သင်ကြားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်တူညီသောဝန်းကျင်တွင်လေ့ကျင့်သင်ကြားနေသမျှကာလပတ်လုံးဤအရာသည်ကူညီလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်သင်ကအမြဲတမ်းအပြင်မှာဖြစ်စေ၊ အတွင်းမှာဖြစ်စေအမြဲတမ်းစမ်းသပ်တယ်ဆိုရင်၊ ဒါကအမြဲတမ်း ၃၅ watts အောက်မှာရှိရင်ပြaနာမဟုတ်ဘူး။ သင်သိသောအရာကသင်ပူနေသောကြောင့်သင်ထွက်ခွာနိုင်သည်။ သို့သော်နောက်ဆုံးနှင့်ဆက်နွယ်နေသောမေးခွန်းမှာသင်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ အိုကေခ
Ryder က 'ငါတို့အားလုံးဟာအမြင့်လေ့ကျင့်မှုအကြောင်းကြားဖူးတယ်' လို့ပြောတယ်။ အပူလေ့ကျင့်မှုလိုမျိုးအရာတစ်ခုရှိလား။ '' ဟုတ်ကဲ့၊ ဟုတ်တယ်၊ အပူရှိန်ပိုရရန်သင်လေ့ကျင့်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်ဟာအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာအေးပြီးစိုစွတ်နေတဲ့ကျေးလက်ဒေသမှာနေတယ်၊ ​​ဒါပေမဲ့လှပပြီးပူပြင်းတဲ့၊ နေသာတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုအတွက်လေ့ကျင့်နေတယ်ဆိုရင်ဒါကသင်မသွားခင်မှာအပူအချို့ကိုရရှိဖို့အတွက်တကယ်ကိုကောင်းပါတယ်။
ငါ Matt သည်သူ၏ကားဂိုဒေါင်ထဲမှာတခါလုပ်ခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်။ ပြီးတော့သင်တစ် ဦး ချွေးထွက်အလုပ်လုပ်နေသမျှ, သင်မသွားခင်တစ်ရက်လျှင်ငါးရက်၊ တစ်ရက်ကိုတစ်နာရီလုပ်ပါ၊ ၎င်းသည်သင့်အားအပူနှင့်လိုက်ဖက်ညီစေသင့်သည်။ ဒီတော့အပူသင်တန်း။
မှန်ကန်သော ထို့နောက် Quickfire အတွက်မည်သို့ဖြစ်ခဲ့သနည်း။ ဖြစ်ကောင်းမဟုတ်ကြောင်းအစာရှောင်ပေမယ့်မျှော်လင့်မေးခွန်းများကိုဖြေကြားခဲ့ကြသည်အဆင်ပြေ ered ။ ထိုအခါငါကအချက်ရဲ့ထင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ကအမြဲတမ်းအမည်ပြောင်း, ကွဲပြားခြားနားသောမခေါ်နိုင်ဘူး။ Gabriel Blanchfield ကမေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်။ သူက၎င်း၏ crankset ၏inရိယာထဲမှာထူးဆန်းတဲ့ creak ရှိတယ်, မြင်နိုင်ပျက်စီးမှုမရှိ, ဘီးကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားသည်နှင့်ကြီးမားသောလက်စွပ်၌တည်သောအခါသာပေါ်ပေါက်ပါတယ်။
၎င်းသည်သင်၏ကွင်းဆက်သော့များလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့အားသင်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်သေချာအောင်ပြုလုပ်ရန်သင့်အားအကြံပြုလိုသည်။ သူတို့သည်တွားတတ်သောအသံမဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့ကဲ့သို့သောနှိပ်သံကိုပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အောက်ခြေ bracket ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ဟာဒီလမ်းကြောင်းကိုမသွားမီလမ်းတစ်လျှောက်လုံးကိုမသွားမီ၊ သင့်စက်ဘီးပေါ်ခြေရာခံရာမှာခြေရာခံရာမှာဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုတကယ်ကြည့်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ ကွဲပြားခြားနားသော permutation ရှိပါတယ်ကြောင့်, ဆောင်းပါး။
ဥပမာအားဖြင့်, ငါဖြစ်ပျက်သော creak ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါကငါ့ cranksets ကိုချွတ်လာမယ့်ခဲ့သည်သေချာခဲ့ပါတယ်နှင့်ငါကုန်းနှီးကိုချွတ်တယ်အခါတိုင်းကငါ့အရှေ့အမြန်လွှတ်ပေးရန်ခဲ့သည်ထွက်လှည့်။ ငါမင်းကိုနောက်တာမဟုတ်ဘူး။ သွားကြစို့
အသုံးပြုရန်အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူအောက်ခြေ bracket ကထက်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, ဆောင်းပါးသည်လက်ရှိကစားနေသည်, ထွက်စစ်ဆေးပါ။ ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မိသည့်စက်ဘီးသည်အလွန်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ esand သည်သင်၏စီးနင်းမှုကိုယေဘုယျအားဖြင့်ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
ကျိန်စာမှမည်သည့်စက်ဘီးမှမလွတ်ကင်းပါစေ။ ယခုသင်၏စီးနင်းမှုကိုဖျက်ဆီးသည့်အပြင်၎င်းသည် ပို၍ လေးနက်သောအရာတစ်ခု၏နိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကာဗွန်ပျက်စီးသွားပြီးကျဆုံးသွားလျှင်၎င်းသည်ကြီးမားသောတွားသွားမှုကိုထုတ်လွှတ်နိုင်သည်။
ဒါကြောင့်ဆူညံသံကိုသင်အမှန်တကယ်ခံနိုင်ရည်ရှိရင်တောင်မှဆူညံသံကိုအာရုံစိုက်ရန်အမြဲတမ်းကောင်းပါတယ်။ ကျပန်းစက်ဘီးခရီးစဉ်သည်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကပြပွဲအောက်တွင်အမှန်တကယ်ကောင်းသောမေးခွန်းတစ်ခုကိုမေးခဲ့တယ်။ သင့်ရဲ့လက်ကိုင်တွေကိုထိန်းညှိဖို့အကောင်းဆုံးအနေအထား (သို့) ထောင့်ကဘာလဲ။ သင်အချို့တွေ့လား အနည်းငယ် sloped နှင့်အချို့ sloped ကြသည်။ '' ကောင်းတာပေါ့၊ အများကြီးဟာမင်းရဲ့လက်ကိုင်ဘောင်ပုံသဏ္onာန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးမင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကြိုက်အပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်။
အမှန်မှာ၎င်းသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ငါ့မှာငါ့မှာရှိတယ်။ Lasty ၏စက်ဘီးတွင်ဤတွင်ပေါင်းစပ်ထားသောလက်ကိုင်ဘားနှင့်ပင်စည်ရှိသည်။
ဒါကြောင့်သူမှာရွေးချယ်စရာတကယ်မရှိဘူး၊ Trek ကဒီဟာကအကောင်းဆုံးထောင့်ကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတာမင်းသိမြင်ခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ငါလည်းလုပ်လိမ့်မယ် သင်စစ်ဆေးချင်သောအရာနှစ်ခု
ဦး စွာ၊ သင်၏ဘရိတ်အဖုံးဘေးတွင်ရှိသောလက်ကိုင်၏ထောင့်။ ဒါကြောင့်သင်ကကြိုက်နှစ်သက်သလားဒါမှမဟုတ်ချောချောမွေ့မွေ့ကူးပြောင်းခြင်းကိုကြိုက်လား? ယခုအခါလူအများစုကချောချောမွေ့မွေ့ကူးပြောင်းသည့်အကူးအပြောင်းကိုကျင့်သုံးကြသည်။ အခြားအရာ, သင်အငြိမ့်ပေါက်ကိုင်နိုင်ပါသလဲ? မင်းရဲ့လက်ကောက်ဝတ်မှာအဆင်ပြေတဲ့ထောင့်ရှိရမယ်ဆိုတာ။
ယေဘုယျအားဖြင့်ယေဘုယျအားဖြင့်သင်သည်သင်၏လက်ကောက်ဝတ်များကိုအလွန်အကျွံမလိုချင်ခြင်းသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာမသက်မသာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အပေါ်သို့မဟုတ်အောက်ဖြစ်စေဒီလိုမျိုးမျိုးပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်သင်သည်သင်၏လက်ကောက်ဝတ်များကိုကြားနေအနေအထားရှိစေချင်ပါသည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ကိုင်များထံမှသင်၏ဘရိတ်အုပ်သို့သွားသောအခါစိတ်ချမ်းသာသည်။
သင့်တွင်သတင်းအချက်အလက်အချို့ပေးမည်ဟုမျှော်လင့်သည့်အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရှိသည်။ မင်းကိုစမ်းကြည့်မယ် ပထမဆုံးတင်ပြရမည့်အချက်မှာလက်ကိုင်ဘားအကျယ်ဖြစ်သည်။
ကောင်းပြီ, လမ်းဘေးကိုပုံမှန်အားဖြင့်အကျယ် ၃၈ မှ ၄၆ လက်မအထိရှိသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်သင်သည်သင်၏အမြင့်ကိုအခြေခံပြီးသင်၏လက်ကိုင်ကိုရွေးချယ်လိမ့်မည်။ အမြင့်သည်၎င်းနှင့်အမှန်တကယ်မပတ်သက်ပါက၎င်းသည်သင်၏ပခုံးအကျယ်ဖြစ်သည်။
လက်ကိုင်ဘားများသည်သင်၏ AC အဆစ်များအကြားအကွာအဝေးနှင့်တူညီသည်။ သူများသည်သင်၏ပခုံးပေါ်ရှိကျောက်ဆူး bits များဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့လက်ကိုင်တွေကိုရေထဲကျအောင်ထားရင်သင်၏ခြေဆစ်ကပခုံးပြင်မှာပဲရှိတယ်။
မင်းရဲ့မေးခွန်းကိုငါဖြေပြီ ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါဒီတစ်ပတ်မှာသင့်မေးခွန်းကိုဖြေဖို့ပတ်ပတ်လည်မှာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့မှတ်ချက်တွေအပိုင်းကိုပြန်ထားပါ။ အကယ်၍ သင့်တွင်မေးခွန်းအသစ်ရှိလျှင်သို့မဟုတ်ပြသရန်အသစ်ဖြစ်လျှင်သင်၏မေးခွန်းများကိုအောက်ပါမှတ်ချက်များအပိုင်း (သို့) TorqueBack ရှိလူမှုမီဒီယာတွင်တင်ပါ။
ယခုဤဆောင်းပါးမထွက်ခွာမီ GCN တွင်စာရင်းသွင်းရန်သေချာပါစေ။ ၎င်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်၊ ကမ္ဘာလုံးကိုနှိပ်ပါ၊ နောက်အကြောင်းအရာများပိုမိုလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏မင်္ဂလာပါ၊ မနက်ဖြန်စတင်သည့် Tour de France ကြိုတင်ပြသမှုအတွက်၎င်းကိုသာနှိပ်ပါ။ အကယ်၍ ဤဆောင်းပါးကိုကြည့်ပါကဤဆောင်းပါးကိုကြည့်ပါကသင်ကိုယ်တိုင်ဆက်လက်ထားရှိပါ။ ရက်စွဲ။ ပြီးတော့ဒန်နှင့်မက်ဂန္ထဝင်အတွက်သင်၏ရေပုလင်းထဲမှသောက်ရန်နည်းလမ်းကိုးခု။
တစ် ဦး ထက်ပိုသောအဘယ်သူသည်ထင်ကြလိမ့်မည်နည်း ရုံအဲဒီမှာကလစ်နှိပ်ပါ။
TO သို့ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ထားသောတပ်ဆင်တိတ်ဆိတ်အနည်းဆုံး 120 decibels နှင့်မကြာခဏ 130 decibels အထက်ဆူညံသံထုတ်လုပ်သည်။ ဖန်စီစက်ဘီးစီးသူများသည်ပြုပြင်ရန်ရူပီး ၁၀၀၀ မှ ၃၀၀၀ ကြားတွင်သုံးစွဲသည်အိပ်ဇောဆိုင်ကယ်၏စနစ်များ။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတာဝန်ရှိသူများကစက်ရုံပုံစံကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်တရားမဝင်အဆိုပါမော်တော်ယာဉ်များအက်ဥပဒေအောက်မှာ။ဇန်နဝါရီ ၂၉ အောက်တိုဘာ 2018
မော်တော်ယာဉ်အက်ဥပဒေတွင်ပြောင်းလဲမှုများကိုကန့်သတ်ထားသည်အိန္ဒိယ။ ပညတ္တိကျမ်းအရထိုသို့ဖြစ်သည်ပြင်ဆင်ရန်တရားမဝင်မော်တော်ယာဉ်၏ဖွဲ့စည်းပုံသို့မဟုတ်အရောင်။ ပြုပြင်မွမ်းမံစေရန်တရားဝင်ပိုင်ရှင်တွေကအသစ်ရရမယ်ပြုပြင်ထားသောARAI (မော်တော်ကားဆိုင်ရာသုတေသနအာဏာပိုင်) မှအတည်ပြုသောအစိတ်အပိုင်းများအိန္ဒိယ) နှင့်ထောက်ခံစာမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရ။၈ ဇူလိုင် အောက်တိုဘာ 2018
ငါသုံးနိုင်တယ်WD-40ငါ့ကို lube ရန်စက်ဘီးကွင်းဆက်? အသုံးမပြုသင့်ပါWD40အဖြစ်ကွင်းဆက်ကတည်းကချောဆီWD-40၎င်းသည်အဓိကအသုံးပြုမှုဖြစ်သောကြောင့်အရည်ပျော်ပစ္စည်း (သို့) သံချေးများကဲ့သို့ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်စစ်မှန်သည့်ချောဆီကိုမဟုတ်ပါ။24.03.2020
အိပ်ဇောအတွက်တရားဝင် DB ကဘာလဲ?
ယခုလက်ရှိတရားဝင်ကားအစည်းအဝေးကျင်းပမှုအမျိုးအစားအတည်ပြုချက်အတွက်ဆူညံသံကန့်သတ်ချက် ၇၄ ဖြစ်သည်decibels, ပြီးတော့ကားရဲ့ပြုပြင်မွမ်းမံရန်တရားမဝင်ဖြစ်ပါတယ်အိပ်ဇောကခွင့်ပြုချက်လွန်အဆင့်မှာထက်ကဆူညံစေရန်စနစ်။ဇွန် ၈ ။ ဒီဇင်ဘာ 2019
ကျည်ဆန်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ Challan ရှိပါသလား?
ရဲကလွတ်လွတ်လပ်လပ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားနိုင်လို့ဒါကမင်းကိုဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်တစ် ဦး challan။ အရေးအကြီးဆုံးမှာနိုင်ငံ၏နေရာအနှံ့အပြားတွင်ရဲများသည်စက်ဘီးများကိုသိမ်းယူပြီး၊တိတ်ဆိတ်သူတို့ကိုရှင်းရှင်း ဖျက်ဆီး၍၊ ဤရွေ့ကားယူနစ်ပိုင်ရှင်များအတွက်ဒုက္ခပေမယ့်ဘာမျှမဖြစ်ကြပြီးသူတို့နှင့်ဝေးနေဖို့အကြံပြုလိုတယ်။မတ် ၃၁ 2021
အဘယ်ကြောင့် 600cc စက်ဘီးအိန္ဒိယတွင်တားမြစ်ထားသလဲ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထုတ်လုပ်သူအများစုသည်၎င်းတို့၏လီတာ - အတန်းအစားထုတ်ကုန်များကိုတရားဝင်ရောင်းချသည်အိန္ဒိယ, အစိုးရအစောပိုင်းကစည်းမျဉ်းများပိတ်ပင်ထားသည်၏တင်သွင်းမှုနှင့်ရောင်းချခြင်း600ccအပိုင်းမော်တော်ဆိုင်ကယ်များinအိန္ဒိယ။ ပညတ္တိကျမ်းအဘို့အလုံလောက်သောနေရာပေးရန်လုပ်ခဲ့သည်အိန္ဒိယထုတ်လုပ်သူစျေးကွက်အတွက်ကြီးထွားရန်။ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက် 2018
တောက်ပသောအကြံဥာဏ်! ဘယ်စာအုပ်စာအုပ်ပဲ။ သင်၏နောက်ပါတီပွဲ၌ပျော်စရာအဆင်တန်ဆာအဖြစ်စက်ဘီးအသစ်တစ်ခုကိုတောင်စက်ဘီးတစ်စီးထဲထည့်ပါ။ ဒီအပြုသဘောကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောဆိုင်ကယ်တင်ဆက် ငါသည်ဤသည်မည်မျှချစ်စရာဆိုလို ??? နံရံပေါ်ကကြေးမုံ Mirror!
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဤစက်ဘီးကိုအနီရောင်၊ အဖြူနှင့်အပြာဖြင့်အလံများနှင့် streamers များဖြင့်အလှဆင်အလှဆင်ခြင်းနှင့်အနီးအနားရှိဆိုင်ကယ်ချီတက်ပွဲတွင် ၀ င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။ သင့်ရဲ့စက်ဘီးချီတက်ပွဲအလှဆင်လာအောင်နှိုးဆွကူညီရန်ကျနော်တို့ငါးခုတက်ဝိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်မွေးနေ့များအတွက်စိတ်ကူးများကိုမြင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ရှိရမည် ယင်းတို့ကိုစီးပွားဖြစ်ဖြင့်မြင်ပြီးသူတို့အတွက်အင်တာနက်ကို ၂ ရက်ကြာရှာဖွေခဲ့သည်။
စက်ဘီးအနားကွပ်အလင်းများ: စိတ်ကူးရိုးရှင်းခဲ့ပါတယ်။ LED ကြိုးအလင်းကိုဝယ်ယူပါ၊ ဖြုတ်ပါ၊ ဘက်ထရီဖြင့်ပါဝါပါ။ ပြောရန်နေရာတွင်ယက်ပါ။ သင်၏စက်ဘီးအတွက်ချိုမြိန်သည့်အနားကွပ်မီးများရရှိပါသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အလွန်လွယ်ကူသည်။ အဖြစ်မှန်ကအများကြီးပိုရှုပ်ထွေးပြီးခဏကြာတယ်။